B2B: Uyenza njani iFunnel yesiZukulwana esiKhokeleli kwiMedia yeNtlalo | Martech Zone
Imidiya yoluntu yindlela enhle yoku ukudala izithuthi kunye nokwazisa ngebrendi kodwa kunokuba ngumceli mngeni omkhulu ekuveliseni izikhokelo zeB2B. Kutheni le nto imithombo yeendaba zentlalo ingasebenzi kakuhle ekusebenzeni njenge-funnel ye-B2B yokuthengisa kunye nendlela yokuwoyisa loo mngeni? Masizame ukuyiqonda!
Imicelimngeni yesiZukulwana esiKhokela kwimidiya yoluntu
Kukho izizathu ezibini eziphambili zokuba kutheni amaqonga eendaba ezentlalo kunzima ukujika abe ngamajelo avelisa isikhokelo:
Ukuthengisa kwimidiya yoluntu kuyaphazamisa -Nokuba ujolise kangakanani kwisicwangciso sakho semidiya yoluntu, imidiya yoluntu ayiqhelekanga ukuba ibe yindawo apho abantu benza ishishini. Bakhangela kwimithombo yeendaba zentlalo ukuze bafumane abahlobo, usapho kunye nabantu abasebenza nabo. Basenokujonga ukuphazamiseka kwinkqubo yabo yomsebenzi kwaye babukele iividiyo ezimnandi okanye iimemes. Amakhonkco eendaba zakho zentlalo aphazamisa inkqubo. Nokuba ujolise kolu hlaziyo kakuhle kakhulu kwaye ufikelele kubaphulaphuli abafunwayo, ihlala ingeloxesha elifanelekileyo lethemba lakho.
Uhambo lokuthenga olunzima kakhulu - Xa kuziwa kwi-B2B, abathengisi kunye nabaphathi beentengiso kufuneka bajongane neeyunithi zokwenza izigqibo, abantu abaninzi abanokugqiba ukuba imveliso yakho yinto abafuna ukuyityala kuyo. .), abaphathi (umphathi wezentengiso, umphathi wophuhliso lwemveliso, umphathi wenkxaso yabathengi, njl.njl.) kunye nomsebenzisi wokugqibela (umntu oya kuba ngaphambili usebenzisa imveliso yakho, njengomhlalutyi we-SEO okanye iqela lokufikelela kwikhonkco. ). Ngenxa yoko, uhambo lokuthenga lungathatha iiveki kunye neenyanga ngelixa isithembiso sakho sihamba ukusuka kwisebe ukuya kwelinye. Phantse akukho kuthenga ngokungxamisekileyo endaweni esebenza kakuhle kwintengiso yemidiya yoluntu. Udinga iindawo ezininzi zokuchukumisa ngakumbi ukukhumbuza ithemba lakho ngawe kunye nemveliso yakho.
Uzivelisa njani iiNkokheli kwiMedia yeNtlalo?
Nangona kunjalo, imithombo yeendaba zentlalo isenokuthi isebenze kakuhle kakhulu ukuvelisa izikhokelo kunye nokuxhasa ezinye iinzame zesizukulwana esikhokelayo. Nantsi indlela.
1. Cwangcisa inkqubo yakho yokuphulaphula kwimidiya yoluntu
Ukubeka iliso kwimidiya yoluntu kubalulekile ekudaleni i-funnel yokuthengisa esebenzayo. Ufuna ukukwazi ukuba khona ukuze uthathe inxaxheba kwiingxoxo ezifanelekileyo kwaye uphendule ukukhankanywa kwemidiya yoluntu. Kuya kukunceda ukuba uqonde amaqhinga okuvelisa okhuphisana nabo kunye nokunxibelelana ngcono kubaphulaphuli ojolise kubo.
UAwario inikeza isisombululo esibanzi sokuphulaphula kumajelo asekuhlaleni onokuthi usebenzise ukubeka iliso kwi-brand yakho, amagama abantu okhuphisana nabo, iingxoxo zakho zabaphulaphuli ekujoliswe kuzo, njl. Ngokusebenzisa i-Awario's boolean search feature unokubeka iliso malunga nantoni na. Ngaphezulu koko, i-Awario ibonelela ngenqaku elikhokelayo lesizukulwana elikunceda ukuba ubambe iincoko ezinokukhokelela kuguquko ngokulula.
Ukongeza kumamela kumajelo eendaba ezentlalo, qwalasela ukulandelela iiprofayili eziphambili zemidiya yoluntu kwi-bio kunye notshintsho lwemifanekiso yeprofayile: Oku kuya kukuvumela ukuba ubeke ixesha lakho lokuchukumisa ngcono xa ithemba lakho linyusiwe, libhiyozela isiganeko esibalulekileyo, okanye ukuthengisa into ebalulekileyo, njengencwadi entsha okanye isiganeko.
Ukujonga yindlela entle yokuseta olu hlobo lolawulo olukuvumela ukuba ulumkiswe malunga notshintsho Instagram, Facebook, okanye amaphepha akhuselweyo ngegama lokugqitha:
2. Yenza iphepha lokuhlala kwimidiya yoluntu (okanye indawo)
Ininzi into ethethwayo malunga nephepha lokufika ekufanele ukuba lijike abantu bemithombo yeendaba zentlalo babe ngabakhokeleyo, kwaye akukho nalinye iingcebiso apha eliya kuba lilungile. Kuya kufuneka uzame kwaye uvavanyo lwe-A/B kakhulu. Kukho imigaqo esisiseko:
Kuya kufuneka, ngokucacileyo, ibe ye-mobile-friendly njengoko uninzi lwabantu lufikelela kwimidiya yoluntu kwizixhobo eziphathwayo
Kufuneka ilayishe ngokukhawuleza, kwaye ukhonze elona candelo libalulekileyo kuqala ukuze lingaphulukani nabasebenzisi beendaba zoluntu abangenamonde
Kufuneka ibe nobungqina obucacileyo bentlalontle, ngokukhethekayo obuvela kubaphembeleli abaqondwa kakuhle. Reviews zibaluleke kakhulu ukuguqula i-traffic media media
Okokugqibela, kufuneka ibandakanye iindwendwe zakho kwangoko, ishenxise nawaphi na amanyathelo ongezelelweyo.
Ngokufanelekileyo, ufuna iindwendwe zephepha lakho zenze isenzo kwangoko.
Ukumema iindwendwe zekhasi lakho ukuba zikhethe i-slot yexesha le-demo yamahhala ngumbono omkhulu kuba oko kuphelisa inani le-imeyile emva nangaphandle kunye nokunciphisa i-funnel yokuthengisa. Appointfix Lusetyenziso olusebenzayo oluvumela amathuba akho okucwangcisa umnxeba kwaye uyongeze kwikhalenda yabo ngonqakrazo olunye lwemouse.
Enye ingcinga kuku yongeza incoko ephilayo inketho eyona ndlela ilungileyo yokubabandakanya kwinkqubo yokuthengisa kwangoko.
Kwezinye iimeko, ukunika into simahla kwangoko kuphela kwendlela yokubandakanya i-traffic media media. Ayingombono umbi ukubafumana ukuba babhalisele i-webinar yasimahla. Kukho iindidi ezininzi ze-social-media-friendly amaqonga webinar ikuvumela ukuba udlale ngokudlala kwimidiya yoluntu.
Kwimibhobho ethile, iyavakala ukuseta indawo eyahlukileyo eya kwahlulwa kuhlobo lwakho oluphambili. Ngokomzekelo, unokwenza i-newsletter ye-niche ejoliswe kakhulu okanye usethe iforum ye-niche kwaye wenze ukuba inyathelo lokuqala kumbhobho wakho.
Kule meko, ukwenza iwebhusayithi eyahlukileyo kunengqiqo. Akukho mfuneko yokuhlawula itoni yegama lesizinda, ungasebenzisa Namify ukufumana ngokukhawuleza i-domain engabizi kakhulu eya kuba lula ukuyibhala.
3. Qinisekisa ukuba uhlaziyo lwakho (okanye iintengiso) lubandakanya ngokwenene
Ngokucacileyo, akukho iresiphi enye yokudala umxholo osebenzayo wemidiya yoluntu.
Kodwa nazi iimbono ezimbalwa onokuthi uzame ngazo:
Sebenzisa imifanekiso emininzi kunye neevidiyo: Ezi ziya kunceda ishishini lakho ngokubonakala kwakho ngezinto eziphilayo ngokuhlelwa kumfanekiso kunye iicarousels zevidiyo
Yenza iipoli zemveli kwaye emva koko upapashe iziphumo zakho kwiposti yokulandela
Iimpembelelo zethegi ozikhankanya kumxholo wakho ukuze ufumane uncedo ngokuwukhuthaza
Buza imibuzo emininzi
Isongezo sokubhaliweyo yindlela entle yokufumana imibuzo enomdla onokuthi uyibuze kwimidiya yoluntu kwaye ubandakanye ngakumbi abaphulaphuli bakho:
Apha kwakhona isikhokelo enkulu ekudaleni a isicwangciso somxholo wemidiya yoluntu.
4. Ixesha lohlaziyo okanye iintengiso zakho kakuhle
Ixesha liyinto yonke kwintengiso yemidiya yoluntu kuba ikuvumela ukuba ubhale ngaphezulu kwento yokuphazamiseka ebesixoxe ngayo ngaphambili.
Eminye imizekelo yexesha elifanelekileyo ibandakanya:
Umcimbi we-niche ozayo wonke umntu athetha ngawo
Umkhwa okanye utshintsho lwezoqoqosho olwenze ukuba imveliso yakho ibe luncedo ngakumbi (cinga nge-Zoom esebenza iintengiso ezikude ngexesha lokuvalwa kwe-Covid)
Ixesha lonyaka (umz. ixesha elizayo lerhafu), njl.
iintsingiselo Google yindlela elungileyo yokuqikelela iintsingiselo zamaxesha onyaka. Isenokulinganiselwa kwindawo ethile:
5. Zibhale kakuhle ezo zikhokelo
Ukulungelelaniswa ngundoqo xa kuziwa kwisizukulwana esikhokelayo: Kufuneka wazi ngokucacileyo ukuba ngubani osele uqhagamshelwe, zeziphi ezo ndawo zokuchukumisa ziye zafika ngoku, kwaye i-DMU nganye (iyunithi yokwenza izigqibo) ibonakala njani.
Apha kulapho isisombululo esihle seCRM singena khona.
Nalu uthelekiso oluqinileyo amaqonga amakhulu eCRM ukuze ukhethe. Jonga isisombululo sesoftware esibonelela ngenqaku eliluqilima lolawulo lombhobho kwaye wenze iiprofayili ezikhokelayo ezineenkcukacha.
6. Funa uncedo kubaphembeleli
Intengiso ye-Influencer yongezwa kakhulu kwisizukulwana esikhokelayo esiqhutywa yimidiya yoluntu kuba abantu bayabathemba abantu. Ukukhwela iimpembelelo ezimbalwa ze-niche kuya kukunceda uvelise ukuthembana. Kuya kukunceda ukuba ufumane uphononongo oluxabisekileyo kunye nobungqina obunokusetyenziswa kwiphepha lakho lokufika leendaba zentlalo.
Kukho isikhokelo esineenkcukacha malunga nendlela yokwenza win abaphembeleli beendaba zoluntu ngaphandle kwenkxaso.
UAwario ibonelela ngesixhobo esinamandla sokuthengisa esikuvumela ukuba uchonge abantu abadumileyo abancinci kwi-niche yakho kunye neyona ndlela ilungileyo yokufikelela kubo:
7. Bandakanya iqela lakho lonke kwinkqubo
Ukuthengisa kwimidiya yoluntu kubandakanya abantu abaninzi kuneqela lakho lokuthengisa. Kufuneka ube nabaphathi beendaba zentlalo ebhodini kunye nemigudu yakho kuba ngabona babandakanyekayo kwinkqubo kwaye kufuneka uhlale uyamkela ingxelo evela kwiqela lakho lenkxaso yabathengi kuba bahamba phambili ekusebenzisaneni nabathengi bakho bangoku.
Kwaneqela lakho lophuhliso lwemveliso kufuneka libandakanyeke kuba imidiya yoluntu yindlela efanelekileyo yokuvelisa impendulo yexesha langempela kwizixhobo zakho.
Ke ukugcina inkampani yakho yonke ibandakanyeka kwinkqubo kuya kunceda wonke umntu kwaye kukuncede ufumane iziphumo ezibonakalayo ngakumbi kwiinzame zakho. Ukuba awuqinisekanga ukuba uyenza njani loo nto, thatha oku Uvavanyo loNxibelelwano oluManyeneyo ukuchonga indlela yokuseta inkqubo.
8. Yahlula kwaye uthengise kwakhona iintengiso zakho zemidiya yoluntu
Okokugqibela, amajelo eendaba ezentlalo asongezo esigqibeleleyo kuzo zonke iinzame zakho zesizukulwana esikhokelayo kuba unokujolisa kwakhona iindwendwe zakho zesayithi ngokusekwe kunxibelelwano lwabo lwangaphambili kunye nesiza.
Ngeli xesha onke amaqonga eendaba ezentlalo abonelela ngenqaku lokuthengisa kwakhona:
Facebook (kunye ne-Instagram): Unokuzibuyisela iintengiso zakho kubantu abandwendwele indawo yakho, baguqulwe, bashiya iinqwelo zabo zokuthenga, njl.
Twitter: Ungaphinda uthengise kubasebenzisi abakubonileyo okanye abasebenzisana nawe kuTwitter
LinkedIn: Unokuphinda ujonge iintengiso zakho ngewebhusayithi, iintengiso zevidiyo, iiFom zeNkokeli yeGen okanye kungekudala iSigigaba se-LinkedIn.
Intengiso yemidiya yoluntu inomngeni omnye omkhulu wokumelana nawo: Kufuneka uhlale ulapho ukuze ubone iziphumo. Ngomzuzu uyeka, amanani akhokelayo aya kuqalisa itanki. Ke akukho sikali apha: Yinkqubo eqhubekayo.
Iindaba ezimnandi kukuba, ukusebenzisa izixhobo kunye namanyathelo angentla uya kuba nakho ukuseta isicwangciso esisebenzayo sokuvelisa ukwenza uninzi lwetrafikhi yemidiya yoluntu. Umnqweno omhle!
Ukwazisa: Martech Zone usebenzisa amakhonkco abo adibeneyo kwiimveliso ezithile kweli nqaku.
tags: awariob2bUhambo lwabathengi b2bIsizukulwana esikhokelayo se-b2bCRMiiplatifti zecrmgoogleukuthengisa okunempembeleloiinkxaso-maliAbathinteliiivoti zomthonyamaukuvotaisahlulointengiso yoluntuUkumamela ngokwasentlalweniImidiya yokuncokolai-ad segmentation yemidiya yoluntuisicwangciso somxholo wemidiya yoluntuiphepha lokufika kweendaba zosasazoimithombo yeendaba zentlalo zikhokelela kwisizukulwanaimithombo yeendaba zentlalo ukumamelaulwahlulo lwemidiya yoluntuinkxasoiimpembelelo zethegiisilungisi sokubhaliweyoTwitterUnxibelelwano olumanyeneyoiintengiso ze-carousel yevidiyoukujongayoutube
U-Ann Smarty luphawu kunye nomphathi woluntu kwi-Intanethi yeNtengiso yeNinjas kunye nomseki we Iinyosi zesiqulatho sentsholongwane. Umsebenzi ka-Ann wokuphucula i-injini yokukhangela waqala ngo-2010. Ungumhleli oyintloko we-Search Engine Journal kunye negalelo kukhangelo olubalaseleyo kunye neeblogi zentlalo, kubandakanywa iiTrendi zamaShishini amaNcinci kunye ne-Mashable.
Ezona zixhobo ziyi-8 ziBalaseleyo (zaSimahla) zoPhando lwegama elingundoqo ngo-2022